Atọ n'Ime Otu na Moksha: Gburugburu Ebe Ọdịdị Nhọrọ Alternative Ọzọ.. Site na Linux
Na-aga n'ihu n'usoro isiokwu anyị na Gburugburu Ebe Obibi dị na ọtụtụ anyị ma na-eto eto GNU / Linux Distros, ugbu a ọ bụ uzo nke 2 ntakịrị amaghi ma ọ bụ ewu ewu, a na-akpọ Atọ n'Ime Otu y Moksha.
Ma bụ derivi (ndụdụ) nke ochie Gburugburu Ebe Obibi gini anọwo modernized iji nọgide na-arụ ọrụ na ụfọdụ GNU / Linux Distros ma ọ bụ ọtụtụ, ọkachasị iji uru nke ikike ya, n'ihe gbasara obere ihe oriri (RAM, CPU).
Dị ka anyị hụworo, ohere dị na mbara iji 1 ma ọ bụ karịa Desktọpụ Gburugburu na anyị GNU / Linux Sistemụ arụmọrụ. Ruo ugbu a, anyị enyochaala ihe kacha mara amara ma ọ bụ zuru ụwa ọnụ (GNOME, KDE Plasma, XFCE, pawuda, MGBE, Lxde y NXT, na ndị ọzọ amachaghị, mana dị ka ọgbara ọhụụ na arụ ọrụ (Deepin, arụsị y Budgie).
Ma ọ bụ ezie, na-agụta ndị a Gara aga 10 Desktop Gburugburu, gbakwunyere Atọ n'Ime Otu y Moksha, e nwere ndị ka na-ụfọdụ ndị ọzọ dokwara na-akpali ma ọ bụ pụtara ìhè ịmata, ichoputa na / ma ọ bụ na-agbalị.
1 Atọ n'Ime Otu na Moksha: Ebe Desktọpụ
1.1 Atumatu Okpukpe Desktọiti
1.1.2 Isi atụmatụ
1.1.3 akụkọ ihe mere eme
1.2 Desktọpụ Moksha
Atọ n'Ime Otu na Moksha: Ebe Desktọpụ
Atumatu Okpukpe Desktọiti
El Ebe obibi Desktọpụ akpọ Atumatu Okpukpe Desktọiti (TDE) dị ka ndị mmepe ya si dị, e kere ya ma jigide ya na ebumnuche bụ isi nke ịchekwa arụmọrụ na akụkụ ọhụụ nke usoro ochie na-enweghị usoro na nke mepere emepe.
Kpọmkwem, TDE na-achọ ịnye na / ma ọ bụ nye Desktọpụ Environment:
Mgbanwe na ukwuu customizable.
Anya mara mma.
Onwem na a kwesịrị ekwesị collection of sọọsọ na ka dakọtara na ochie ngwaike.
Ọ bụ anabata ochie ngwaike na dakọtara na ọhụrụ ngwaike.
Na-akwado osooso 3D, mana anaghị achọ XNUMXD osooso iji rụọ ọrụ, yana the ominiraesktop.org na Linux file system hierarchy standards, yana desktọọpụ ndị ọzọ.
Ike iji nyefee arụmọrụ HCI kachasị (Human-Computer Interaction) na oke / gburugburu ebe obibi.
N'etiti njirimara ndị na-eme ka TDE nwere ike kwuru:
Ogwe ọdịnala, ogwe ọrụ, njikwa ọrụ, na ngwa ngwa ngwa.
Ebe nchekwa nke ngwa ngwanrọ dakọtara, gụnyere ndị editọ ederede dị iche iche, onye njikwa faili, ndị na-ekiri onyonyo, ngwa ọfịs, njikwa faili, yana Amarok egwu egwu egwu mbụ na mma.
Ntughari nzaghachi na mkparịta ụka mkpọchi desktọọpụ.
Otu onye ahịa ihe ngosi DBUS kwupụtara ka emezigharị iji meziwanye njikọta na ngwa ndị a na-ahụkarị dịka Firefox na NetworkManager (enweghị mkpa maka HAL).
TDE malitere dị ka a n'ihu nke K Desktọpụ gburugburu ebe obibi (KDE) mbipute 3. Aha nke Atọ n'Ime Otu (Trinidad, n’asụsụ Spanish) n’akụkụ ụfọdụ, n’ihi na okwu ahụ pụtara “Atọ” na TDE bụ n'ihu nke KDE 3. TDE ugbu a bu oru nke gi Ebe obibi Desktọpụ maka kọmputa. Ihe oru ngo TDE tọrọ ntọala ma na-aga n'ihu na-agba ọsọ Timothy Pearson, onye bụ ọkachamara a nwetara software Mmepụta, onye bụbu onye nhazi KDE 3.x site na nsụgharị ndị gara aga nke Kubuntu.
TDE abiaghi na otu Distro dika Ebe obibi Desktọpụ ndabara, mana enwere ike ịnwe maka Distros dị ka Altlinux, Exe GNU / Linux, PCLinuxOS, Q4OS, Slack na ụfọdụ nsụgharị nke Ubuntu. Ọzọkwa, ọ na-aga ugbu a maka mbipute R14.0.7 nke ewepụtara na 30/12/2019. Maka ozi ọzọ na TDE ị nwere ike ịga leta gị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị Na njikọ na-esonụ.
El Ebe obibi Desktọpụ akpọ Desktọpụ Moksha (MD) Dabere na ndị mmepe ya, emepụtara ya ma jigide ya na ebumnuche bụ isi nke ịchekwa arụmọrụ na akụkụ anya nke Windows Manager Ihe omuma 17 (E17) nke a na-ewerekarị dị ka Ebe obibi Desktọpụ. N'ụzọ dị otú a, imeghari ya, melite ya, mee ka ọ dị ọhụrụ ma mee ka ọ kwekọọ na atụmatụ nke nsụgharị n'ọdịnihu nke Nghọta, yana iwepu ya, ihe okara ma obu ihe gbajiri nke E17 dị.
Kpọmkwem, MD na-achọ ịnye na / ma ọ bụ nye Desktọpụ Environment:
Mee ka ọ bụrụ n'ihu E17 na mgbanwe, ndozi na ndozi emere na Bodhi GNU / Linux nke bụ Distro ebe etolitere ya.
Nke ahụ gụnyere ụfọdụ atụmatụ kacha mma, nke oge a, na nke bara uru nke E18 na E19. Ọzọkwa, ụfọdụ ihe ọhụụ ndị otu mmepe chere na ọ bara uru iji meziwanye ahụmịhe onye ọrụ njedebe.
Nwee ike karịa nsụgharị nkuzi nke mechara wee were obere RAM rụọ ọrụ.
Bụrụ onye Desktọpụ dabara na nyiwe Linux metụtara, gafere nne ya Distro, Bodhi GNU / Linux.
Otú ọ dị, MD n'ihi na ugbu a ọ na-adị mfe na-akwado na DEBIAN 8 (Jessie), dị ka ogologo dị ka ya Mmepụta anaghị jikwaa modernize ya ngwugwu iji mee ka ọ dakọtara na ọzọ oge a na nsụgharị nke DEBIAN GNU / Linux. Maka ozi ndị ọzọ gbasara MD, ị nwere ike ịga leta nke ya ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị Na njikọ na-esonụ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Trinity y Moksha», 2 «Entornos de Escritorio» ọzọ na-akpali, na ha «Distros GNU/Linux» amaala ma obu eburu ndi ozo amara nke oma «DEBIAN GNU/Linux» nwere ike nke ukwuu aka na ụfọdụ, karịsịa na ubi nke ichekwa ihe oriri, nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Atọ n'Ime Otu na Moksha: Gburugburu Ebe Obibi Desktọ Ndị Ọzọ Na-atọ 2tọ
A tọhapụrụla ụdị ọhụrụ nke Apache CouchDB 3.0 ma ndị a bụ mgbanwe ya
DragonFlyBSD 5.8 rutere na ndozi maka DRM, mebere ebe nchekwa na ndị ọzọ